Abalingani bakaNgqongqoshe wezeMpilo uZweli Mkhize bathole imali eyizigidi zamarandi ye-Covid | Scrolla Izindaba
Abalingani bakaNgqongqoshe wezeMpilo uZweli Mkhize bathole imali eyizigidi zamarandi ye-Covid
Okhulumela uMnyango wezeMpilo kaDkt uZweli Mkhize kanye nalowo owayengunobhala wangasese benze imali nge-Covid-19 njengayabacebisi abakhokhelwayo abasebenzela inkampani yezokuxhumana eqashwe uhulumeni, kubika i-Daily Maverick ngoLwesibili.
I-Digital Vibes, inkampani encane ezinze KwaZulu-Natali, yaqasha uTahera Mather (ophezulu, ogqoke okubomvu ngenhla) noNaadhira Mitha (ophezulu, kwesokudla) ngemuva nje kokunikezwa inkontileka yezokuxhumana emnyangweni kaMkhize.
Kusukela ngoNdasa ngowezi-2020, izinkontileka zokuxhumana ezingabiza imali eyigidi ezingama-R82 zinikezwe i-Digital Vibes.
UMather ungumkhulumeli wesikhathi eside kaMkhize kanye nomngani osondelene womndeni. Kubikwa ukuthi ubudlelwano babo buqala emuva ngowezi-1990, lapho uMkhize wayenguNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natali.
Ekuqaleni kowezi2020, yena noMather, owayengunobhala wangasese kaMkhize, bajoyina i-Digital Vibes njengabaluleki.
Kodwa-ke, uMnyango wezeMpilo ugcizelele ukuthi lokhu akuphakamisi ukungqubuzana kwezintshisekelo.
Ngokunjalo, uMather utshele i-Daily Maverick ukuthi, “Ngiyabona ukuthi eminye yemibuzo oyibuzayo, ifaka isimilo esikhohlakele kimi nakwabanye. Lokhu kusikisela nokusolwa kungehlisa isithunzi futhi kulimaza mina nabanye.”
Ukuxhumana kwe-Digital Vibes noMkhize kwaqala kudala ngaphambi kwe-Covid-19, nangaphambi kokuba abe nguNgqongqoshe WezeMpilo.
Ngenkathi uholwa nguMkhize ngoNcwaba ngowezi-2018, uMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu (i-Cogta) wanikeza inkampani inkontileka yemali eyizigidi ezi-R3,9 yezinsizakalo zokuxhumana.
Ngenyanga efanayo, uMather wanikezwa umsebenzi okhokhelayo wokubonisana nabasenkampanini e-Digital Vibes.
Ngemuva kwesikhashana uMkhize eqokwe njengoNgqongqoshe WezeMpilo ngoNhlaba ngowezi-2019, i-Digital Vibes yanikezwa inkontileka nguMnyango WezeMpilo. Lapha, kwaqashwa ukusiza umkhankaso womnyango wokukhishwa kwe-National Health Insurance (i-NHI).
Futhi, uMather waqashwa yinkampani njengomxhumanisi okhokhelwayo, kanti uMitha naye waqashwa ngalesi sikhathi.
NgoNdasa ngowezi-2020, umnyango waphoqeleka ukuthi ugxile empini yomhlaba ebhekene ne-Covid-19 neqhaza le-Digital Vibes elanwetshwa ukubheka imizamo yokubhekana nalolu bhubhane.
UMather noMitha bahlala njengabaluleki benkampani. Lokhu kusho ukuthi izikhulu ezimbili zikahulumeni zifake ephaketheni imali yosizo oluphuthumayo lwe-Covid-19.
Ngaphezu kwezinyanga eziyisishiyagalolunye kuphela, imali engaphezulu kweyizigidi ezingama-R82 inikezwe inkampani yezokuxhumana engacacile. Le mali isetshenziselwe “ukuphrinta nokusabalalisa amapheshana ayizigidi ezingama-35” kanye “nezinsizakalo zokuxhumana ezihlobene ne-Covid-19”, kubika i-Daily Maverick.